Musiyano uripo pakati peManheru Tilting uye Kutsenhama Mawiricheya
A yakagara pawiricheya ine backrest iyo inodzokera kumashure kubva ingangoita yakatwasuka kumusoro; chaiwo 90 madhigirii uye angangoita akaenzana. Chiito chekutsenhama chinoita chiuno chemushandisi kuti chiwedzere uye chinoshandura chinzvimbo chavo kubva kune agere kune mumwe akafanana nekurara kumusana.
A wiricheya iyo inokamhina ine chigaro chechigaro icho chinosendamira kumashure mumashure akasiyanasiyana; kubva padhuze nekumusoro kumashure kutenderera makumi mashanu madhigirii. Iko kumira kwechiuno hakuwedzerwe nekuda kwe tilting wiricheya's kurereka chiito. Mushandisi anoramba ari munzvimbo yakafanana paakagara; zvisinei, inotsamira kumashure. kurereka mavhiripu inowanzo sarudzirwa vana kana vanhu vakuru, vanoda rubatsiro, chengetedzo uye manejimendi manejimendi.
Kuenzanisa kurereka uye Kutsanya
Ini ndiri mutsigiri mukuru we tilting mavhiripu panzvimbo pokugara; zvisinei, yega yega inoitirwa chimwe chinangwa uye pane zvimwe zvinhu zvinoita kutsenhama mavhiripu zvakakodzera kune vamwe vashandisi.
Features nokuti Recliner
Kugara kuchishandiswa nevanhu vane macatheters avo vanoda kuvashandura vakagara mukati mavo wiricheya.
Kazhinji inodhura kupfuura kurereka mavhiripu.
Tinowanzo peta kuti zvichengetwe uye kutakurwa.
Inowanzo shandiswa kutakura vanhu kuenda mumota umo imba yemusoro haina kukwana mumwe munhu kushandisa ari wiricheya.
Kutsamira mavhiripu vane zvimwe zvakakosha izvo zvinofanirwa kutariswa:
Kana mushandisi akadonhedzwa, giravhiti inoita kuti mabhodhoro avo ayedze kutsvedza pamberi, kure ne wiricheya. Kana vakatsvedza, zvinokwanisika kuti vadonhe vagomhara pasi; kana zvigaro zvikavatadzisa kutsvedza, simba rinoshandiswa, rinozivikanwa nekuveura. Izvi zvinorwadza zvakanyanya uye zvinopedzisira zvokonzera kuora kweganda.
Uye zvakare, kana wakatsenhama, musana wemushandisi unotsvedza pasi kumashure kweiyo upholstery. Izvi zvinokonzeresa nyaya mbiri dzekunze:
Chekutanga, hapana backrest iyo yakaumbwa kana yakamonyororwa inogona kushandiswa sezvo mushandisi acharamba achiendeswa kubva pachinzvimbo.
Kechipiri, mushure mekunge mushandisi adzorerwa panzvimbo yakatwasuka, izvi zvinotungamira mukuveura zvakare sezvo giravhiti iri kuyedza kuchengetedza musana wemushandisi kubva mukutsvedza kumusoro kweiyo upholstery.
Mirairo yekuzorora kwemakumbo kwakasimudzwa kazhinji inogara ichiitwa nekutsenhama mavhiripu iyo inowedzera iyo wiricheyaMutengo uye huremu. Kune vazhinji vashandisi, kudzikisirwa kunorwadza zvakanyanya, kunze kwekunge makumbo asimudzwa.
Kutsamira mavhiripu zvinowanzoremera uye zvinonetsa kuti mushandisi azviendese ega.
Chinhu chekupedzisira chakaipira ndechekuti vanopa rubatsiro vanofanirwa kudzora mashandiro ekutsenhama mavhiripu ayo ari manyoro (akakwirira unhu simba mavhiripu gonesa mushandisi kubata yavo yekumashure chinzvimbo zvakazvimiririra).
Inobatsira mukutonga chinzvimbo uye poindi yevana pamwe nevakuru.
Chinoshandura nzvimbo dzekumanikidza dzemushandisi uye kudzikisira mukana wekumanikidza maronda apo kurereka chinzvimbo chinoshandurwa nguva dzose.
Inogonesa kumisikidza kwakakodzera kana lift yashandiswa ku chinja vashandisi mu wiricheya.
Yakakodzera kune yega yega system ye tsika zvigaro uye zvigaro zvinowanika zviripo kubva pakaunda.
Inobatsira kukwidziridza iyo nzvimbo yekutarisa kune vashandisi avo vakatsoropodza kumberi nekuda kwe kyphosis, inozivikanwawo sekuvhima kumashure kana kutenderera kumashure.
Simudza huwandu hwenguva iyo mushandisi anoramba ari pachigaro kana kona ye kurereka inoshandurwa kazhinji.
Zvinogoneka kuti kurereka iyo kumashure kuti iite nyore kupinda mune ipfupi masuo emotokari.
Zvinogoneka kuti kurereka iyo zvachose kumashure yekuzorora kana kurara.
Kukanganisa kwe kurereka
Kunze kwemamwe madiki madiki marudzi evana, haakwanise kupeta. Izvi zvinoreva kuti kufambisa nekuzvichengeta zvinoda kutariswa uye kuronga.
Chinhu chechipiri chakashata ndechekuti nekuda kwekuremerwa kwazvakaita, hazvisi nyore kuzvisimudzira uye hazvifanirwe kutarisirwa zvechokwadi a kufamba mashandiro erusununguko.
Chinhu chekupedzisira chakaipira ndechekuti zvinosungirwa kuti muchengeti agadzirise kurereka mashandiro pane tilting mavhiripu ayo ari manyoro (akakwirira unhu simba mavhiripu gonesa mushandisi kuzvimiririra kutonga kwavo chigaro kurereka).
Kutsamira mavhiripu zvinowanikwa zvakanyanya; zvisinei, ivo havawanzo kusarudzwa ne wiricheya vashandisi mazuva ano. kurereka mavhiripu ratidza chaizvo zvese zvakanakira, zvishoma zvakakanganisika uye zvimwe zvekuwedzera zvimwe zvichienzaniswa nevanodzikamisa.
Hunhu hwemhando mbiri idzi dze mavhiripu chipo zvinobatsira yevashandisi vane zvinodiwa zvakanyanya kuomarara pane zviya zvakajairika wiricheya vanoshandisa.